October2018 – hoo!haa!!
Ike Ịjụ ụzọ na Dọkịta anya
NKWUPỤTA ONYE JIRI ỊHỤ ỤZỌ YA KPỌRỌ ÍHÉ. Ebe e jiworo onyinye nsọ nke bụ ikikere ịhụ ụzọ gozie m, ọ ga-amasị m na onyinye a ga-anọgide oge ndụ m nile. I ji mee ka nke a dị írè, enyelam onwe m iwu ndi a dịka o ọrụ: (1) ỊRead More →
Ichie Ikedi Ọhakịm, Gọvanọ chịburu Imo Steeti ekwuola na ” udiri mpụ na-aga n’ihu n’APGA ugbua egosiwo na site na mbido, APGA bụ ọnya ndi isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ gbara dịka MMM iji gbunahụ ndi Igbo ibe ha ego ha tara ahụhụ kpata” Ọhakịm boro ebubo a mgbeRead More →
EZE(King)/EZE (Teeth)/ỌNỤ (Mouth)
Agentịna:Asọmmpi bọl ndi akpụda
Ajentịna nọrọ n’izu gara aga chịkọba asọmmpi iko Copa America nke ndi akpụda. Nke a bụ mbụ a na-eme asọmmpi bọl maka ndi mkpụmkpụ. Morocco nọ n’Afrịka mana eziterekwara ha ozi pụrụ iche isonye mba ndi nọgasị n’Amerịka dịka Chile, Colombia, Argentina, Brazil, Peru nakwa Bolivia. N’okwu ya, Martin-Klebba, na-agbaraRead More →
Ejije NGAGHARỊ IWE NDI INYOM ABA
Ka alụchara ọgụ sitere na ngagharị iwe ndi inyom Aba, ndi inyom Oloko, Abia Steeti ka na-ana onwe ha aka maka “ịlụ ọgụ ka nwoke” na ya bụ esemokwu dịịrị ha na ndi mba Britenụ. Ihe butere ọgụ a bụ esemokwu dapụtara n’abalị iri n’asatọ nke ọnwa Nọvemba, afọ 1929,Read More →
Ahu otutu nke akpaakwa nwa.
Bu Ahụ otutu nke akpaakwa nwa (ovarian cyst) Akpaakwa nwa bụ ihe n’emepụta akwa nwayị ji amụ nwa. Akpa mmiri nke ana-akpọ ahụ otutu (cyst) n’eto na akpaakwa nwa. Ọtụtụ ụmụ nwanyị n’enwe ahụ otutu na ndụ ha. Ụdị ahụ otutu nke akpaakwa nwa (1) Ahụ otutu nke follicle: N’ogeRead More →
IZREL ENYELA KANỤ NCHEKWA
Ozi anyị nwetara na-egosi na mba Izrel enyela Mazị Nnamdị Kanu, onye ndu otu IPOB nchekwa dịka onye a na-akpagbu akpagbu. Nkea na-eme ka Gọọmentị Naịjiriya na nke Izrel ka na-eme “kpu kpu mkpu ogele” n’okwu banyere ma Kanụ anọ Izrel ugbua ka ọ nọghị. Nke bụ ihe a na-emebụRead More →
NNAMDỊ KANỤ O JI ỌGWU?
“Nnamdị Kanụ, o ji ọgwụ?“. Ihea bụ ajụjụ ọtutụ na-ajụ kemgbe Mazị Nnamdị Kanụ, onyeisi otu na-achọ nnwere onwe Bịafra bụ IPOB gbakwara n’ọgbọ ọzọ. Kemgbe ndi agha “Egwu Eke” wakpochara obi nna ya bụ Eze Izrel Kanụ n’Afaraukwu, Ụmụahịa n’ọnwa Septemba afọ gara aga wee gbuo ndi IPOB madụRead More →
ỤMỤ EJIMA LỤRỤ ỤMỤ EJIMA
Accra, Gana: Mba Gana nwere nnukwu ọnụ ọgụgụ ụmụ ejima yifere onwe ha oke. N’ọnwa gara aga, ụmụ ejima ụmụnwanyị abụọ lụrụ ụmụ nwoke abụọ na-aza otu aha. Ụmụ ejima nwanyị abụọ ahụ na-aza otu aha nke bụ Josephina Acheampomaa. N’agbanyeghị na ha esighi otu obodo ma ya fọzịa ibụRead More →
UKWU (WAIST)/ỤKWỤ (LEG)/UKWU(BIG)
Asọmmpi GOtvBoxingNight16 kporo ekpo
Legọsị: Asọmmpi GOtvBoxingNight e mere n’abalị ụka n’ama egwuregwu Teslim Elias dị na Surulere, Legọsị kporo ekpo. Taiwo “Esekpọ” Agbaje, ọkaibe otiọkpọ nke asọmmpi ahụ nwetara iko nturugo nke ncheta Mojisola Ogunsanya ya na ihe nrite Otu Nde Naịra n’ọkara so ya n’azụ. Ya bụ otiọkpọ amakebeghi aha ya nọRead More →
Ọ ATIKU N’OKONJỌ-IWEALA?
Ozi na-eru hoo!haa!! aka gosiri na Alhaji Atiku Abụbaka na-achọ iwere Dọkịnta Ngọzị Okonjọ-Iweala dịka Osote ya na ịzọ ọkwa Onyeisiala n’aha PDP. Nkea bụ maka okwu Sinetọ Devid Mak kwuru n’ọgbakọ ukwu nhọpụta ndi PDP na Pọt Hakọtụ na ọ bụ sọọsọ ya bụ Devid Mak mere onye nwanyịRead More →
ỌTỤMỌKPỌ ADỊZỊ NA SINETI?
E jikwuzi ọtụmọkpọ achụ Onyeisi Sineti Naịjiriya bụ Sinetọ Bukọla Saraki? Ka Sinetọ Dino Melaye abịakwala ọzọ, ya na njakịrị ya na-akpụ ọkụ n’ọnụ? Ihe a bụ ajụjụ ndi mmadụ na-ajụ ụnyahụ n’ọgbakọ Sineti mgbe Dino jiri nkachifu ọcha were hichaa oche Onyeisi Sineti tupu Saraki anọdụ ala were maliteRead More →
NGWA ISI NRI (Condiments)
Johannesburg: N’ụbọchị Orie bụ abalị isii nke ọnwa Ọktoba ka Ndigbo bi na mba Saụt Afrịka nọrọ n’ogige Observatory Sports Club na Johannesburg were mee mmemme Ịwa Ji nke afọ a. N’ezie, Ịwa Ji Saụt Afrịka nke afọ a kpụ ọkụ n’ọnụ. Ndigbo bi na mpaghara itolu nke mba SaụtRead More →
ANỤ ỌHỊA NWERE ỤKWỤ ANỌ
AKPA NJỌ AKPỤKPỤWO NNENANNA YA ỤLỌIKPE
Otu nwanyị jọrọ oke njọ, Annabelle Jefferson, onye dị afọ iri anọ n’anọ anọrọla na Hollywood,California mba Amerịka kpụpụ nne na nna ya ụlọikpe ka ha kwụọ ya nde dọla abụọ ($2m) maka “ịgba ya ụchụ” Nwanyị a bụ “akpa njọ ” na-ekwu na oke njọ a ọ jọrọ nkeRead More →